အမအေ့တှကျ စာဖွဆေုရတဲ့ ငှလေေးနဲ့ မယျတျောကွီးကို စိနျနားကပျဝယျဆငျပေးတဲ့ ဦးဇငျးလေး - Shweman
အမအေ့တှကျ စာဖွဆေုရတဲ့ ငှလေေးနဲ့ မယျတျောကွီးကို စိနျနားကပျဝယျဆငျပေးတဲ့ ဦးဇငျးလေး
ဒီလိုပို့မြိုးကိုမှ မရှယျရငျ ဘယျလိုပို့မြိုးကို ရှယျမှာလဲ မိတျဆှေ….
စာဖွဆေုရတဲ့ ငှလေေးနဲ့ မယျတျောကွီးကို နားကပျဝယျဆငျပေးတဲ့ ဦးဇငျးလေးဘယျပနျးခြီရေးလို့ မမှီပါပဲတကယျ့ကို စိတျကွညျနူးစရာလေးပါပဲ..။ ဘယျပနျးခြီရေးလို့ မမှီနိုငျတဲ့ ပုံလေးတှပေါပဲ..။ မွငျသူတိုငျးရဲ့ စိတျထဲမှာ ဦးဇငျးလေးတို့ သားအမိရဲ့ စိတျထဲမှာ ဘယျလောကျအထိ ကွညျနူးပီတိ ဖွဈနလေိုကျမလဲဆိုတာကို တှေးကွညျ့နကွေပါလိမျမယျ။
ဦးဇငျးလေးရဲ့ ဘှဲ့အမညျ ဦးသားပညာ ကြောကျဆညျ မှေးရပျဇာတိလို့ ယူဆရပါတယျ..။ သင်ျကွနျကာလလေးမှာ အသငျးစာဖွပှေဲတဈခုကနေ ဆုရလို့ မယျတျောကွီးအတှကျ နားကပျလေးတဈရံဝယျပေးပွီး ကိုယျတိုငျကိုယျကြ ဆငျမွနျးပေးနတောကို ကွညျ့နူလှနျးလို့ မြှဝေပေးလိုကျပါတယျအခုလိုဆုရဖို့အတှကျ ဦးဇငျးလေး နနေ့ညေ့ည ကွိုးစားခဲ့ရကွောငျးလညျး ရေးသားထားပါတယျ..။
အမကေတော့ မကျြရညျလေးတှေ ၀ဲနရှောတယျတဲ့..။ ဒီည အမေ့ ခမြာ အိပျတောငျပြျောပါ့မလားကှယျတယျ့..။ ဘယျ အိပျပြျောမလဲ ဦးဇငျးလေးရယျ..ဦးဇငျးလေးရဲ့ အမေ ဦးဇငျးလေးရဲ့ သိတတျမှုကို တစိမျ့စိမျ့တှေးပွီး ၀မျးသာပီတိ အပွညျ့ဖွဈနမေယျ့ အခြိနျတှကေ တဈရကျ တဈည နဲ့ ဘယျလုံလောကျပါ့လဲ..။
ဦးကိုယျကနျြးမာ စိတျခမျြးသာပွီး မယျတျောကွီးအပျေါ ဒီထကျကြေးဇူးသိတတျပွီးသာသနာအကြိုးကိုလညျး လှယျကူ ခြောမှစှေ့ာ ထမျးရှကျနိုငျပါစေ..ဦးဇငျးလေးရဲ့ မယျတျောကွီးလညျး ကိုယျကနျြးမာ စိတျခမျြးသာပွီး သကျတျောရာကြျော ရှညျပါစလေို့ အပနျးပွေ မှ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျခငျဗြာ..။
ဒီနပေဲ့ သားပညာ အမရှေိတဲ့ ရှာကလေးကို ပွနျရောကျပါသညျ။
ဒီလိုပို့မျိုးကိုမှ မရှယ်ရင် ဘယ်လိုပို့မျိုးကို ရှယ်မှာလဲ မိတ်ဆွေ….
စာဖြေဆုရတဲ့ ငွေလေးနဲ့ မယ်တော်ကြီးကို နားကပ်ဝယ်ဆင်ပေးတဲ့ ဦးဇင်းလေးဘယ်ပန်းချီရေးလို့ မမှီပါပဲတကယ့်ကို စိတ်ကြည်နူးစရာလေးပါပဲ..။ ဘယ်ပန်းချီရေးလို့ မမှီနိုင်တဲ့ ပုံလေးတွေပါပဲ..။ မြင်သူတိုင်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဦးဇင်းလေးတို့ သားအမိရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လောက်အထိ ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်နေလိုက်မလဲဆိုတာကို တွေးကြည့်နေကြပါလိမ်မယ်။
ဦးဇင်းလေးရဲ့ ဘွဲ့အမည် ဦးသားပညာ ကျောက်ဆည် မွေးရပ်ဇာတိလို့ ယူဆရပါတယ်..။ သင်္ကြန်ကာလလေးမှာ အသင်းစာဖြေပွဲတစ်ခုကနေ ဆုရလို့ မယ်တော်ကြီးအတွက် နားကပ်လေးတစ်ရံဝယ်ပေးပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆင်မြန်းပေးနေတာကို ကြည့်နူလွန်းလို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်အခုလိုဆုရဖို့အတွက် ဦးဇင်းလေး နေ့နေ့ညည ကြိုးစားခဲ့ရကြောင်းလည်း ရေးသားထားပါတယ်..။ အမေကတော့ မျက်ရည်လေးတွေ ၀ဲနေရှာတယ်တဲ့..။ ဒီည အမေ့ ခမျာ အိပ်တောင်ပျော်ပါ့မလားကွယ်တယ့်..။ ဘယ် အိပ်ပျော်မလဲ ဦးဇင်းလေးရယ်..ဦးဇင်းလေးရဲ့ အမေ ဦးဇင်းလေးရဲ့ သိတတ်မှုကို တစိမ့်စိမ့်တွေးပြီး ၀မ်းသာပီတိ အပြည့်ဖြစ်နေမယ့် အချိန်တွေက တစ်ရက် တစ်ည နဲ့ ဘယ်လုံလောက်ပါ့လဲ..။
ဦးဇင်းလေး ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပြီး မယ်တော်ကြီးအပေါ် ဒီထက်ကျေးဇူးသိတတ်ပြီးသာသနာအကျိုးကိုလည်း လွယ်ကူ ချောမွေ့စွာ ထမ်းရွက်နိုင်ပါစေ..ဦးဇင်းလေးရဲ့ မယ်တော်ကြီးလည်း ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပြီး သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေလို့ အပန်းပြေ မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ..။
ဒီနေ့ပဲ သားပညာ အမေရှိတဲ့ ရွာကလေးကို ပြန်ရောက်ပါသည်။
ကိုဗစ် ဂယက်ကြားက ပြည်တော်ပြန် ဒုတိယလှိုင်း